Zincinci kakhulu izihloko zobuchwephesha kwiCongress of Surveying-Geofumadas
Izihloko ezingezizo ezobuchwephesha kwiNkomfa yoPhando loMhlaba
Ngo-Okthobha, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Sawubona ithenda, kuye kwaba njalo kwintlanganiso Imveliso ngokwenene, ibalulekile eGuatemala kunye nomzuzu obalulekileyo kwingingqi ye-Central America. Ngaphambi kokuba uthethe ngemiba yezobuchwephesha yomsitho-ukuba kuphela abanomdla bam abafundi-, apho ndiza kukunandipha iintsuku ezimbalwa ezilandelayo, ndifuna ukuzisebenzisa ngoku ukukhupha into ethile yimeko endikwazi ukuyisebenzisa kwiindawo ezingenanto kunye nokuba usenqanaba lokuzonwabisa nokuphefumlelwa.
Kuyamangalisa ukuva igama elithi Geofumadas kwilizwi labanye, isambrela apho ndingene kulo mcimbi. Ndiyaneliseka kukuba le migudu ingaphaya kwesiqalo sayo njengeBhlog, ngoku ineendwendwe ezingaphezu kwe-37,000 zenyanga, ithathelwa ingqalelo ngegalelo layo kwimeko yokuthetha iSpanish, emva koko iyavuya xa unjingalwazi ekuxelela ukuba abafundi bakhe bambeka njengombhalo weencwadi ngaphandle kokukwazi ukugqibezela igama lombhali lokungaziwa. Izinto ebomini, ngelixa ungeva kwabanye, awuziboni kwinqanaba elibanzi lokubeka izimvo kwi-Intanethi okanye ukuncokola. Ukugqibezela esi sandulela, mandikuxelele ukuba ibeyinyhweba ukubelana ngeqonga nabantu ekubhekiswa kubo kwimicimbi yolawulo lomhlaba njengoMartin Wubbe waseKadaster, Diego Erba yeLincoln Institute, uJavier Morales we-ITC, uMario Pimetto weCadastre de Córdova kunye noJean Roch Lebbeau we-SEGEPLAN.
Ndikukhumbule xa ndifikayo eQuetzaltenango, iiyure ezintathu ukusuka kwikomkhulu kunye nexesha lokuzama ukushiya isikhululo seenqwelomoya kwisixeko esixineneyo ngeeyure eziphezulu. Eli candelo libandakanye intetho endleleni kunye nexesha lokulala ngokulinganayo notshintsho lobude olwenza ukuba iinwele ezingwevu zilunge, @ 14.66 yeekhilomitha ezinemigca kunye @ 113.47 kwincam yokuphakama ngamanzi eentaba, phaya ngasesidleleni sasekhohlo Amalungu eTotonicapán afikelela kwiimitha ezingama-3,330 ngaphezulu komphakamo wolwandle (hayi endleleni).
Ngobubele, qonda ukuba le nto kukho ukubhideka kakhulu akuyomfuneko kweli nqaku, kodwa yinxalenye ukuya emva, ekhangela kanye njengoko bendihamba ngamafu iinyawo 33,000 ngohlangothi kwiindawo UTM 15N kunye 16N, uvavanyo GaiaGPS kwi-iPad ukubona ukuba iisethelayithi zithatha ntoni kolu ukuphakama nesantya. Andikwazi kulinda ukuba ndize @ khaya, ndibaleke amakhwenkwe, kwaye ndonwabele isigqubuthelo sobugqi seminyaka eli-14 sitshatile kwaye ngaphezulu kwe-17 yokwazi ukuba ubukho apho uvelisa. Indibaniselwano engaqhelekanga yobudenge, inkanuko kunye nencasa ecacileyo yokukhathalela inkangeleko yakho, eyahlukileyo kwisitayile salo mntu uphambeneyo ojonga ukuba iimpahla ziyimfuneko yokuphuma.
Ndiyanitshela, kwakulungile ukwabelana nomntu owayesakuba ngumfundisi-ntsapho kwisikolo sam ekuhlaleni kwiminyaka yam yasekholejini, ukuba kwezo zinto zenzeka kakhulu wayehlala apha eQuetzaltenango kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Okubangela umdla, emva kweminyaka engama-24 esitya nosapho kunye nokonwabela iJocóm elungileyo, isidlo esivela kulo mmandla esiquka inkuku kwisuphu eluhlaza, ivuselelwa ngetortilla ezifudumeleyo, irayisi kunye netiyi yesinamon ehlawulela ipholigoni evulekileyo yomphefumlo iimayile ... hayi iiponti ezingaphezulu. Imisonto ebopha eli bali liphela khange ikwazi ukundithintela ekukhumbuleni amaxesha obuntwana bam, xa imikhwa emibi ye-FMLN yabanqolobi yandenza khangela i nku luleko kwelinye ilizwe kwaye ndibonise uvuyo lwam ukuhamba.
EQuetzaltenango ndiye ndahlala ePosada Bonifaz, ndedwa ndiziva ukuba inkampani yakho iphantse yangathi ubelapha. Indawo ibikhona ukusukela ngo-1936, yindawo entle kakhulu endikucebisayo, ecaleni kwepaki kunye nenxalenye yomxholo ongenakuthintelwa ngezibane ebusuku kunye nebhatyi elungileyo kuba ingqele lelinye ibali. Eli ziko lembali libubungqina obuxabisekileyo bomsebenzi okhuselekileyo weminyaka kamasipala, wokubuyisela ilifa eliyimbali ukusuka kwixesha lobukoloniyali.
Emva kwexesha ndikwazile ukubona obunye ubungqina obuxabisekileyo baloo minyaka yoKratshi lwaseSpain; iHermitage kaEl Carmen eSalcajá; icawa yamaKatolika endala kuMbindi Merika, eyakhiwa malunga nowe-1524 xa abemi baseSpain babengabahlaseli bokwenene; ayisiyiyo le nto bayenzayo ngoku ngeSiseko se-gvSIG, kodwa ngumoya ofanayo ekubonakala ngathi abayi kuphulukana nokuhamba kwexesha.
Ndingathanda ukudibana nexesha elifanelekileyo, ngo-Agasti ngokuhlonipha uSanta Louis King waseFrance; ixesha apho umkhondo wento ephindaphindekayo engabonakaliyo. Nangona ekuzeni kokusa iyaxhuma kubafazi abathwele abantwana babo emqolo, benxibe iimpahla ezinemibala eqhelekileyo: uhlobo lweblawuzi ebizwa ngokuba yiGüipil kunye nento efana nesiketi esaziwa ngokuba yiCorte, izinto ezihleli kwikratshi leengcambu ezingafiyo. Nangona kushiyeke amasebe ambalwa kakhulu. Kulusizi ukuba uMdaniso weFlying Flying awusenziwa, apho isiqu esime esikwereni sakha isiseko sebhasikithi ejikelezayo, apho abantu babini baxhonywe kwiluphu ejika kolo luvo lokuziva ukuba ayingokuphela kwamehlo abo aphumayo yi-centripetal spin kwilungu ngalinye π / 4. Kuya kuba lelinye ixesha lokuba undikhaphe, ndiye kwiRabinal okanye eBaja Verapaz apho bathi kusenziwa khona.
Ngoku akukho mikhankaso yesikolo, ukukhwela, ukulwa kweenkunzi kunye neminye yemixube eziswe yiSpanish kwimidaniso; isakulungile ukuba ihamba nesuphu yenkukhu elungileyo kunye nayo Iipapa zikaPapa kunye nokutshintshana kwamahlaya amahle enempilo / eyamkelekileyo njengabantu baseMantla aseMerika kuphela abanokuzibala.
Kumnandi kakhulu, oku kube kukukhanya kohambo okushiya incasa elungileyo emlonyeni wam, ngaphezulu komxholo wenkcubeko ojikeleze uMlambo iSalamá, kufuneka ndivume ukuba indima yabantu abaye bahlukumeza iimeko zesikolo mkhulu Injongo kwindima yayo yokuzinza kwecandelo le-geospatial. Kuyamangalisa kwaye kuyathandeka ukwazi ukuba wonke lo msebenzi wenziwa yiDyunivesithi yaseSan Carlos awukho kwisiXeko saseGuatemala, ke ngoku ukuba sesona sixeko sibalulekileyo saseChapina kwenza bonke oomasipala abadibana nale ntlambo bathathe umceli mngeni kwi-10 elandelayo. iminyaka. Siza kubona ukuba bayalihlonipha na ikomkhulu lamandulo lobukumkani bamaQuiché, xa lalibizwa ngokuba yiXelaju emva koko uPedro de Alvarado wabiza iLa Tierra del Quetzal ngolwimi lwama-Aztec. Ndikubonile ngokucacileyo ebusweni bamanye amakhwenkwe anqabile kwiminyaka yabo yokuqala yobomi, kwaye oko kulungele wonke umntu.
Ukukhuthaza, kodwa kufuneka ndibuyele kwiingoma zam ezixutywe ngamatye, endiphethe ipike kwincam yolwimi lwam. Ukongeza, zitshilo nje ukuba izixhobo ze-elektroniki mazicinywe, kwaye andifuni ukuthatha intsingiselo yentsusa yenqaku eliqala okokuqala kwaye laphela ngokoqobo emafini kwi-iPad emsulwa. Ke, enkosi ngokuthatha iindlebe zentsimi yengqolowa, uqonde ixesha lam, kwaye undikhaphe ngaphaya kokucinga kolu hambo. Kwimizuzu embalwa ndiza kuhla, kwaye kuya kuba kuhle ukuva kwakhona olo lwimi oluqondwa nguwe kuphela nam, olunokuba lwalukhona ngaphambi kokuba ndidibane nawe nolushukumisa ooqongqothwane esibindini kunye neenyembezi ezinamathambo abuhlungu ebusuku.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Abaphandi, iProjekthi yeRhafu yokuThengisa izindlu
Post Next IGuatemala kunye nomceli mngeni wayo wokufumana indima yeAkhademi kuLawulo lweeNdawoOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 ziye "kwizihloko ezincinci zobuchwephesha kwiCongress of Surveying"
… Ngokuqinisekileyo, amabinzana aliqela azinikele.
Siyabonga ngokulandela le ndawo kwaye nithatha ngokungenanto ukuba ikhona.
Molo Rudy. Bekumnandi ukwabelana nawe kwinkomfa, ndizisola ngokuba ixesha lifutshane kwaye ishedyuli iqinile. Kodwa ngokuqinisekileyo liya kuba nexesha lotyelelo apho okanye lokudlula kwengxowankulu, nokuba ikhaldito okanye ikomityi yekofu emnandi ihlala ilungile.
Vukani kwaye niqhubeke phambili nomncintiswano.
URudy Ottoniel de León Manrique uthi:
Molweni igama lam NdinguRudy De Leon, yaye inxalenye yolawulo lomhlaba kwinkongolo, mna ngumfundi kwisiqingatha sesibini yolawulo komhlaba Quetzaltenango kunye neqhayiya ukuba unyana ka-Salcajá, wakhula ukudlalisa nje ecaweni San Jacinto kwaye andazi ukuba uvuyo ndiziva ukwazi izimvo zenu malunga naloo nto kwaye malunga nendawo apho ndazalelwa, ukuba ndithe ndingakhange eyaziwa ndiza kutyelela intwana yam iparadesi bekuya kuba wayefuna ukwabelana nani iglasi caldito iziqhamo kunye iqhekeza ngelaphu ukuze ze izandla bam abazalwana bobugcisa, kodwa intliziyo yam igcwele uvuyo ukwazi ukuba inxalenye yento ayeyithandayo xa wayetyelela yayiyidolophu enkulu uSalcajá.